Indlela yokwenza i-eye-up for eyes ngezikhukuphu ezizayo: i-5 lifhak
Qaphela ngokubhekiselele ekukhetheni izimonyo. Isiseko sokuqala sisisiseko esibalulekileyo sokwenza i-make-up: ayiyi kuvumela ukuba iingubo zivaliwe kwiindawo ezidlulileyo. I-Satin kunye ne-shammering shadows iyanqatshelwe: i-textures nge-shimmer iya kwandisa ingxaki, idibanise umthamo ongadingekanga kwinqanaba lekhulu. Kodwa i-pigment matte ye-shadow shades - nje into oyifunayo.
Ziqaphele ngezithunzi ezikhanyayo - akufanele zisetyenziswe ukufaka isicelo kwi-ilepidi yeselula. Nika ukukhetha kwi-beige ekhanyayo okanye i-shades e-nude, kwaye i-milky ne-pink pin igxininisa iimbombo zangaphakathi zamehlo kunye nommandla kunye nomgca wezantsi weenki.
Sebenzisa ubuchule bokuthi "i-watercolor" i-smokey - ukusuka kwiklasi ukusuka ekulula nakakhulu. Musa ukuthaba iintolo ezide kakhulu kunye neentlobo eziluhlaza, khetha i-shadow shades (i-gray-beige, i-pearl-grey, i-malachite, i-pearl-purple) kwaye uyijonge ngokucokisekileyo uze ufumane ukuguqulwa okulula.
Musa ukulibala malunga nokuyila kweelishi. Ukungahambi kakuhle, ukuguqulwa ngokuchanekileyo kweelishi kukulinganisa intambo "enzima" yejwabu leso, ebonisa ukukhanya. Kodwa ungagqithisi: amaqabunga omnyama amaninzi angenza umphumo ochaseneyo, ugxininise iipilisi ezizayo.
Yenza i-eyelashes ngokufanelekileyo. Ukuphucula umphumo, qala udwebe isikhala esiphezulu kunye nomnxeba omnyama okanye u-anthracite liner, uze udibanise i-eyelashes, usebenzise umgca omnye wesidumbu, ngemizuzu embalwa - okwesibini, ubeka ingqalelo ekhethekileyo kwizinwele ezikwimimandla yangaphandle kwamehlo.
Indlela yokwakha amahle omnandi?
Igadi edibeneyo: iqoqo le-pupa Velvet Garden Fall 2016
Umbutho wenkampani ye-bachelor ye-merry-imibono kunye neengcebiso
AmaSandwich kunye namakhiwane, arugula kunye neparmesan
Ukutshata kunye nombolo yefowuni
Ukuxhatshazwa ngokwesini: njani ukuba ungayifumani?